Pocket Anatomy, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Pocket Anatomy, yemahara kwenguva shoma
Isu tinoenderera mberi nekunyorera kwemhando yepamusoro iyo kwenguva yakati wandei yatinogona kurodha mahara. Nezuro ndakakuzivisa nezve TwisteddWave application, chishandiso chekugadzirisa mafaera ekuteerera ayo kwenguva yakati rebei (haichawanikwe kurodha mahara), tinogona kurodha mahara uye chengetedza iyo 9,99 euros iyo inodhura. Nhasi tinotaura nezvechimwe chikumbiro chine mutengo wakakwira: Pocket Anatomy: Inopindirana Yevanhu Anatomy, iyo ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye 14,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinokwanisa kurodha pasi mahara zvachose. NePocket Anatomy isu tichakwanisa kufamba kubva paganda, kune nhengo dzemukati, mitsipa uye mapfupa system, tichidarika nemumatanho akasiyana etsandanyama.
Kutenda kuPocket Anatomy ticha kugutsa kuda kwedu kuziva zvemukati memuviri wemunhu, mukuwedzera pakudzidzisa kudiki kweimba mashandiro emuviri wedu nenhengo dzakasiyana dzinoigadzira pamwe nekushanda kwadzo. eMedia, mugadziri weichi chishandiso uye nezvimwe zvine hukama nemukati meganda remunhu, zvinoshanda nevashandi vezvehutano, varairidzi nevarwere kuti vakwanise kugadzira zvese izvi uye nezvimwe zvinoshandiswa zviripo muApp Store.
Pocket Anatomy maficha
Pocket Anatony, inoda chinosvika 700 MB yenzvimbo pane yedu kifaa, inotibvumidza kuwana ruzivo rwese pasina kudikanwa kweWi-Fi kana 3G / 4G yekubatanidza.
Iyo inotipa isu intuitive kufamba kuti tikwanise kukurumidza kuwana izvo zvatiri kutsvaga.
Iine zvinopfuura zviuru zana zvekutsvaga, muChirungu chete.
Mikana yekugadzira zvinyorwa zvako mukati mekushandisa.
Kugovera zvemukati pakati peiOS zvishandiso zvakare zvinokwanisika nePocket Anatomy.
Iyo inotibvumidza isu kumisikidza yakasarudzika kudzidza mutinhimira.
Mukati mekushandisa isu tinogona kuwana akasiyana-siyana mu-app kutenga kuti tikwanise kuwana mavhidhiyo nezve kushanda kwemuviri wedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Pocket Anatomy, yemahara kwenguva shoma
Ndatenda, ndiri kuenda kuiisa.
Heist yegore: Swift musiki anosiya Apple yeTesla